Maaliyaddii aan loo Ansixin 3 Waddo Xariiqda Joogtada ah ayaa laga Joogaa Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWasaaradda Maaliyaddu ma aqbalin 3 Xarumood oo Mitir Istaag ah oo laga Joojiyay Magaalada Istanbul
Istambul ma ansixin qasnadda maaliyadda qadka tareenka ee la joojiyay
Duqa Magaalada Caasimadda Istanbul Ekrem İmamoğlu wuxuu sharxay inaysan bilaabi karin ansixinta Hanti dhowrka in kasta oo ay heleen dhibco; Eminönü-Alibeyköy Tram Line, Bostancı-Dudullu Metro Line iyo Yenidoğan-Hospital Line ayaa la bartay. Imamoglu wuxuu wacay tareenka dhulka hoostiisa mara oo leh Madaxweynaha wuxuuna yiri, Hazine Waxaan u baahanahay ogolaanshaha Maaliyadda si aan u abaabulno deynta. Waxaa jira xarun deyn ah, waan helnaa. Kaliya waa taabasho aan dooneyno. ”
SözcüSida lagu sheegay warbixinta Ozlem Guvemli'nin; Madaxweynaha BB İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu sheegay inaysan heli karin ogolaanshaha ay ka codsadeen khasnadda 2da khad ee ay heleen amaahdii ay ka soo shaqeeyeen howlihii ay bilaabeen si ay u howlgalaan khadadka metrooga ee la joojiyay 3 sano ka hor.
Imamoglu, oo taleefanka tareenka ugu yeeray Madaxweynaha, wuxuu yiri:
Waxaan u baahanahay ogolaanshaha qasnadda si aan u abaabulno amaahda.
Codsigeenna ah 3 khad ayaa la diiday usbuucii ugu horreeyay ee Janaayo.
Haddii aan la diidin, waxaan awood u yeelan doonnaa in aan si dhakhso leh u abaabulno khadadka metrooga aaladda tas-hiilaadkaas.
Amaah ayaa jirta, waan helnaa. Kaliya taabasho ayaan rabnaa.
Mid ka mid ah khadadka uu Imamoğlu ka heli waayey oggolaanshaha amaahda ee Wasaaradda Maaliyadda ayaa ah khadka tareenka Dudullu-Bostancı, oo dhererkiisu yahay 21 kiiloomitir, kaas oo yareyn doona masaafada u dhexeysa Bostancı iyo Dudullu illaa 14.3 daqiiqo. Qiimaha khadka metrooga, oo boqolkiiba 70 dhammaystiran oo ka kooban 13 saldhig, ayaa lagu dhawaaqay 558 milyan oo euro oo lagu daray VAT.
İmamoğlu wuxuu caddeeyey in loo baahan yahay 2018 milyan oo Yuuro oo lagu daro maalgelinta VAT ee khadkaan oo istaagay ilaa Oktoobar 200 “Qorshaha maalgashiga ee meeshan waa la siidaayay.
Waxaan rajeyneynaa in la oggolaado oo lagu dhawaaqo usbuucyada ugu horreeya ee 2020. Tan xigta, dadaalkayaga maaliyadeed ayaa sii socon doona Si kastaba ha noqotee, usbuucii ugu horreeyay ee Janaayo wuxuu noqday ogolaanshaha lama huraanka ah.
Khad kale oo ay maaliyaddu oggolaan ayaa ah 10ka mayl Alibeyköy Eyüpsultan Eminönü.
Laga soo bilaabo joogsiga baska Eminönü, wadada waxay mareysaa dhanka xeebta Dahabiga ah ee K tokpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp State Hospital, Silahtarağa Station iyo Sakarya Neighborhood Station. Waxay ku dhammaanaysaa saldhigga.
Imamoglu, oo daraasad ku sameeyay goobta dhismaha khadka khadka usbuucyadii la soo dhaafay, ayaa yidhi, uz Waxaan ka shaqeynaynaa ilo dheeraad ah. Waxaan rabnaa inaan u diyaarinno meeshan 2020 ”.
LAGU DIIWAAN-GALIYO KHATARTA CUSUB EE LAGU SAMEEYO
Khadadka Isbitaalka-Yenidoğan-Sanekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli waa mid ka mid ah khadadka uusan khasnadda Maaliyaddu oggolaan.
Khadkan 6.95 km wuxuu ka kooban yahay Cisbitaalada, Sarıgazi, Aydınlar, Güngören, Taşdelen iyo Yenidoğan.
Dhismaha cusub ee garabka dhaadheer ee Uludag ayaa joojiyay xilli ciyaareedkii
Nidaamyada mitrooga iyo tareenada ee la dhisay khayraadka hantida ayaa ah Baarlamaanka
Shirkadda Gaziantep Metro ayaa la sii daayay
AKM - Gar - Mashruuca Khadka Tareenka ee Kızılay waxaa saxeexay Golaha Magaalada oo u shaqeeya borotokoolka…
Khadadka metrooga oo uusan khasnadda Maaliyaddu ku oggolaanin magaalada Istanbul
Khadka Cusbitaalka Ilmaha-cusub